Honda DN-01: A ibhayisikili enamandla nokunokwethenjelwa nge ukudluliswa ezintsha
Lo mbono wokuthi ibhayisikili umqondo Honda DN-01 uzohlala umqondo, kwakheka ngo-2005, kulandela ukutshengisa isithuthuthu ngesikhathi Tokyo Motor Show. Ukungathembani okubangelwa zithembiso ukusebenza high isithuthuthu ngokusebenzisa yayo ukudluliswa ngokuqhubekayo variable , futhi ubuchwepheshe ezintsha ekukhiqizeni amayunithi eziyisisekelo iyunithi, okwakubekelwa engabe bafakwe emabhayisikili ezemidlalo kulolu chungechunge.
Nakuba ngaleso sikhathi kwakufana ipayipi, kodwa ochwepheshe kusukela inkampani Honda, ngokusebenzisa umsebenzi isikhathi eside futhi kanzima, sebefikile umgomo. Bakwazi ukuthuthukisa imodeli esiyingqayizivele zokusebenza DN-01 ukukhiqiza chungechunge, esasibonisa othenjisiwe ukusebenza embi nesitayela kusuka umqondo wabo ngaphambili ethulwa.
Honda DN 01 njalo ku spotlight, cishe kusukela buqala, futhi edonsa isithakazelo esijulile kuze kube manje. Uma sihlole nomthamo injini V-twin-cylinder, kanye okuqinile namasondo angu nesikhombisa intshi futhi umzimba side understated ke thina flaunts isithuthuthu egcwele. Kodwa uma acabangele ukungabi khona CAT futhi adhesion, kanye kalula ukusebenza ongavamile, kuba lezi kanti ezinye nezinye izici, Honda DN-1 akunakubangelwa okunye okufana engavamile esindayo duty isithuthuthu.
Nokho, Honda DN-01 - izinguquko-a-enomusa, imoto ezimbili ezinamasondo. Ngokokuqala ngqá emlandweni isithuthuthu khona-ke isetjentiswe eziphambili kakhulu, okuzenzakalelayo ngokuphelele gearbox.
Manje, ngenxa kuyi-gearbox okuzenzakalelayo ngokugcwele, umshayeli isithuthuthu Akusadingeki ukuba kudla ushintsho igiya, nakho kunciphisa noma yimaphi amaphutha.
Uhambo olude beshayela ibhayisikili yezemidlalo akuzona kuphela ephephile, kodwa futhi ukuletha injabulo ukushayela. Lokhu imodeli ngesithuthuthu kubhekwe ukuba ekahle ride ekhululekile kunanoma iyiphi enye ukucushwa ibhayisikili.
Ikhono kweso ukuzivumelanisa isithuthuthu izinguquko ezincane kakhulu kwazo nemigwaqo emibi, Lwenziwe by powertrain ezintsha, ukudalwa okuyinto Honda onjiniyela wathatha cishe engu-20.
A esiningi sasetshenziswa ngcono ukudluliswa athuthukile. Ubuchwepheshe, eyamiswa HFT (Human-Friendly Transmission), uye abe uhlobo "ubungani ibhuloho", enqobe umehluko phakathi ukusebenza okuphezulu izithuthuthu kanye omoya ezivamile ngabo, futhi Scooters, nge olubushelelezi yabo nokungapheleli esakuzuza kalula ukusebenza.
Ngakho, ukuphathwa kwezemidlalo isithuthuthu of isizukulwane esisha Honda DN-01 nge ezintsha automatic transmission, esinikela ibhayisikili amandla afanayo nokusheshisa, kanye isithuthuthu ukudluliswa manual, kumane kumnandi.
Kumelwe ukuthi lokhu design ivumela umshayeli ukumane uyizibe inqubo isithuthuthu, ngoba isizukulwane esisha ukudluliswa uzokwenza konke kuye, ukuhlinzeka olubushelelezi namandla angenakuvinjwa okuzokwenza uzizwe ukuphathwa izindiza on amasondo amabili.
Imininingwane Uhlolojikelele ibhayisikili KTM RC390
Usayizi isigqoko, futhi izinga izingxenye zawo - izici ezibaluleke kakhulu lapho ukhetha Ukuvikelwa
Zonke-wheel drive izithuthuthu. Motorcycle "Ural" wonke-wheel drive
ATV RM-500 2: ukubuyekezwa, intengo, ukucinga indikimba yendaba
City imoto Suzuki Ignis
Flying isithuthuthu - isimangaliso entsha ubuchwepheshe
UMthetho Federal "Ngo Customs Regulation of the Russian Federation": lokucuketfwe kanye izici
Kuthiwani uma umculo kubambezela ukuxhumana?
Indlela yokususa imibimbi ngemuva
Itshe elimnyama elichotshoziwe: ubuchwepheshe bokukhiqiza
"Skoda Fabia": imvume Ukucaciswa, test drive, kanye nezithombe
Quartz isibani OUFK-01 "Sun": ukubuyekezwa. Quartz UV irradiator "Sun" OUFK-01
Luffa - zokugeza, eyethulwe nemvelo. Indlela yokwenza siqu loofah abakuzalayo?
Arvense Thlaspi: incazelo, isicelo
Ukubalwa izisekelo. Isibonelo ekubalweni isisekelo inqwaba, induku, columnar, Monolithic, setshe. Ukubalwa base isisekelo: isibonelo. isisekelo ekubalweni ukudluliselwa: Isibonelo
"Lahti" eyenza umuntu acabange eseZwini ungangenisi amanzi: Ukucaciswa kanye nokubuyekeza
Modern Tatar amagama amantombazane
UVladimir Bortko - umqondisi, screenwriter futhi producer oyedwa